Kiobàna Mifofotra Manohana Ny Zon’ireo LGBT · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Jolay 2014 12:18 GMT
Vakio amin'ny teny English, Swahili, македонски, Español
“Mitady fitoviana izahay amin'ny resaka fanambadiana.” Tao Sagua La Grande
Mametraka ny “Revolisiona atao amin'ny alàlan'ny oroka” ireo mpikatroka mafàna fo ao Kiobà mba hanohanana ny zon'ireo LGBT.
Tamin'ny 28 Jona, nahavory olona teo amin'ny 60 teo ho an'ny besada tao amin'ny iray amin'ireo toerana lehibe ao Havana ny “Andiany faharoa amin'ny Fifanorohana am-pitorevahana ho an'ny Fahasamihafàna sy ny Fitoviana”, ary teo amin'ny olona 15 tao Sagua La Grande tao amin'ny Villa Clara Province, izay nokarakarain'ny Proyecto Arcoiris (Tetikasa Avana / Rainbow Project), tetikasa iray tsy miankina ary manohitra ny kapitalisma.
Tao amin'ilay hetsika, novakian'ireo mpikatroka mafàna fo ny taratasy iray izay tsy ela akory no nandefasan'i Arcoiris azy ho an'i Esteban Lazo, filohan'ny rantsana mpanao lalàna ao amin'ny firenena, ny Antenimieram-pirenen'ny Fahefam-Bahoaka, ho fanoherana ny fanesorana ny famantarana ny lahy sy vavy ary ny mitondra ny VIH ho toy ny antom-panavakavahana eo amin'ny tontolon'ny asa tao anatin'ilay Lalàna Vaovao Momba ny Asa ao Kiobà. Nanangona sonia ihany koa ry zareo tao besada.
Ara-tantara dia niaritra fanavakavahana sy fanenjehana hatrany ireo LGBT (vehivavy mitia vehivavy, pelaka, nanova fanànahana) ao Kiobà, saingy nahavita dingana goavana ry zareo raha resaka fakàna ny zo tato anatin'ny taona vitsivitsy. Nefa, mbola betsaka anefa ny mila vitaina.
Topazo maso ny sasany amin'ireo sary tamin'ilay fifanorohana tam-pitorevahana, avy amin'i Rogelio Díaz Moreno sy Maykel González Vivero eto ambany, naverina navoaka rehefa nahazoana alàlana tamin'izy ireo. Raha hijery misimisy, jereo ity lahatsary ity, “Besada for Diversity and Equality, Havana, 2014,( Besada ho amin'ny Fahasamihafàna sy ny Fitoviana)” avy amin'i Raquel Pérez.
Fifanorohana tao La Havana.